Maxay tahay sababta ay Hoggaamiyayaasha Afrika ay Dibadda ugu Aadaan Caafimaad? – Puntland Post
Posted on August 12, 2017 August 12, 2017 by PP-Muqdisho
Maxay tahay sababta ay Hoggaamiyayaasha Afrika ay Dibadda ugu Aadaan Caafimaad?
Muqdisho (PP) ─ Madaxwaynayaasha Nigeria, Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaan dhammaantood kalsooni ku qabin adeegayada caafimaad ee wadamooda. Waxayna wakhti badan ku bixayaan wadamada dibada si ay isu daaweeyaan.
Madaxwaynaha Nigeria Muhammadu Buhari ooa 74 sano jir ah ayaa kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee dibada u aada adeegayada caafimaad. Hoggaamiyayaasha waddamdaan ayaa sanadihii ugu danbeeyey safaro dhowr ah u galay wadamada reer galbeedka si ay isugu soo daweeyaan.
Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tusaale ahaan dalka Zimbabwe in isbitaalada ay dawladdu maamusho iyo goobaha kale ee caafimaad ay gabaabsi ku tahay dawooyinka sida kuwa loo cuno xanuun baab’inta. Waxaana aad u hooseeya adeegyada ay shacabku ka helaan goobahaas.
Halka dalka Nigeria adeegyada caafimaadku ay meelaha qaar gabaabsi yihiin, sababtoo ah ma jiraan maal gelin ku filan oo ay ka helaan dawladda dhexe sida uu soo sheegayo weriyaha BBC-da ee Abuja Naziru Mikailu.
Madaxwaynaha Nigeria ayaa muddo afar bilood ah ku qaatay magaalada London ee UK, halkaas oo looga daawaynayay xanuun aan ilaa hadda la garanayn nooca uu yahay. Waxaana uu xilka uga sii tegay ku xigeenkiisa.
Caafimaad-darrada Buhari ayaa bilaabatay 2017-ka
19-kii January: Wuxuu u safray UK ” isaga oo qaatay fasax caafimaad”
5-tii February: Baarlamaanka ayuu waydiistay in wakhti loogu darro si caafimaad dibada ugu aado
10-kii March: dalkiisa ayuu kusoo laabtay , laakiinse si dhakhso ah shaqada uma bilaabin
7-dii May: Wuxuu u safray UK si uu caafimaadkiisa usoo hubiyo
6-dii June: Xaaskiisa Caa’isha ayaa sheegtay in caafimaadkiisu soo fiicnaaday
Madaxwaynaha Zimbabe Robert Mugabe ayaa xilka madaxtinimo ee dalkaas hayay ilaa 1980-kii, Waxaana la sheegayaa in dalka uu ka maamulo sariir uu caafimaad ahaan u jiifo, kadib markii uu saddex jeer caafimaad u aaday Singapora sanadkan oo keliya.
Madaxwaynaha Angola Jose Eduardo oo isna dalkiisa maamulayay 38 sano ee lasoo dhaafay ayaa dhowr jeer safar u aaday Spain sababo lagu sheegay caafimaad.
Wuxuu xanuusanaa tan iyo sanadkii 2013-kii, waxaana markii ugu horraysay la arkay isaga oo ku socda gaariga curyaamiinta 2014-kii, halka mar saddexaadna la arkay isaga oo loo wado dalka Faransiiska oo uu caafimaad u aaday.
Dalka Benin ayaa waxaa xilka madaxtinimo haya nin da’ ahaan ka yar madaxda kale waxaana uu dhankiisa safar u aaday Faransiiska bishii June. iyadoona lagu sameeyey laba qalliin oo kala duwan. Mid kamid ah ayaa looga qalaykansarka ku dhaca taranka ragga halka mid kalena uu ahaa habdhiska dheef-shiidka.
Ma jiro afhayeen dawladeed oo ku sheegay sababta madaxdu dibada u aadaan in ay tahay adeegyada caafimaad ee wadamadaas oo fiican.
Afhayeenka Mugabi, ayaa ka gaabsaday in uu faah faahin ka bixiyo sababta madaxwaynuhu dhowr jeer u aaday Singapora, isaga oo ku dooday inaan arrintaas looga tusaale qaadan karin adeegga caafimaad ee dalka.
Arrintan oo loo arko in ay tahay “dalxiis caafimaad”, ayaa waxaa hormuud u ah madaxda siyaasada oo malaayiin doolar ku bixiya wadamada ay adeegyada caafimaad u raadsadaan.
2013-kii celi-celis ahaan dadka reer Nigeria ayaa caafimaadka ku bixiyay $1 bilyan oo doolar oo ay u aadeen dibada, waxaana la qiyaasayaa in tiradu ay laba jibaar noqotay.
Dr Enabulele ayaa u sheegay madaxwaynaha Nigeria in adeegyada caafimaad ee uu u aadayo dibadda uu ka heli karo dalkiisa.
Xigasho; BBC Somalia